Jekọb gara hụ Fero (1-12)
Josef gosiri na ọ ma ihe (13-26)
Izrel biweziri na Goshen (27-31)
47 Josef wee gakwuru Fero, gwa ya,+ sị: “Nna m na ụmụnne m esila Kenan bịa. Ha chị ìgwè ewu na atụrụ ha na ìgwè ehi ha, ha bukwa ihe niile ha nwere bịa. Ha nọ na Goshen.”+ 2 Ọ kpọ mmadụ ise n’ime ụmụnne ya ndị nwoke bịa gosi Fero.+ 3 Fero jụrụ ụmụnne ya, sị: “Gịnị ka unu na-arụ?” Ha zara Fero, sị: “Ndị ohu gị bụ ndị na-azụ atụrụ, ma anyịnwa ma nna nna anyị hà.”+ 4 Ha gwaziri Fero, sị: “Anyị bịara ka anyị biri n’ala a+ maka na e nweghị ahịhịa ìgwè anụ ndị ohu gị ga na-ata, n’ihi na ụnwụ a karịrị akarị na Kenan.+ Biko, ka ndị ohu gị biri na Goshen.”+ 5 Fero wee sị Josef: “Nna gị na ụmụnne gị abịakwutela gị n’ebe a. 6 Ala Ijipt dị gị n’aka. Mee ka nna gị na ụmụnne gị biri n’ebe kacha mma n’ala a.+ Ka ha biri n’ala Goshen. Ọ bụrụ na ị ma ndị aka siri ike n’ime ha, họpụta ha ka ha bụrụ ndị isi ndị na-azụ ìgwè anụ m.” 7 Josef kpọbataziri Jekọb nna ya gosi Fero. Jekọb wee gọzie Fero. 8 Fero jụrụ Jekọb, sị: “Ị̀ dị afọ ole?” 9 Jekọb zara Fero, sị: “Adị m otu narị afọ na iri atọ (130). Kemgbe ndụ m, ọ na-abụ m kwara gaa ebe a, mụ akwara gaa ebe a.* Afọ ole na ole a m nọrọla ndụ bụ nsogbu nsogbu.+ Ha erubeghịdị afọ ole nna m hà nọruru n’oge niile ha nọ na-akwagharị n’ebe dị iche iche.”*+ 10 Mgbe ha kwuchara, Jekọb gọziri Fero ma si n’ihu ya pụọ. 11 Josef wee nye nna ya na ụmụnne ya ala ebe ha ga-ebi n’Ijipt. O nyere ha ala n’ebe kacha mma n’Ijipt, ya bụ, n’ala Ramesis,*+ otú Fero nyere ya n’iwu. 12 Josef nọkwa na-enye nna ya na ụmụnne ya na ezinụlọ nna ya niile ihe oriri.* Ọ na-enye ezinụlọ nke ọ bụla ihe ga-ezuru ha na ụmụ ha. 13 Ihe oriri* mechara gwụ n’Ijipt nakwa na Kenan maka na ụnwụ ahụ kpụ ọkụ n’ọnụ. Ike wee gwụ ndị bi n’ala ndị a n’ihi ụnwụ ahụ.+ 14 Josef nọ na-anara ndị Ijipt na ndị Kenan ego niile dị n’obodo ha ma na-eresị ha ọka.*+ Josef nọkwa na-ewebata ego ndị ahụ n’ụlọ Fero. 15 Ka oge na-aga, ego ndị Ijipt na ndị Kenan gwụrụ. Ndị Ijipt niile bịakwuteweziri Josef, na-asị ya: “Nye anyị ihe oriri! Ị̀ ga-anọ na-ele anyị n’anya n’anya anyị anwụọ maka na ego anyị agwụla?” 16 Josef sịziri ha: “Ọ bụrụ na ego unu agwụla, kpụtawanụ anụmanụ unu. M ga-enye unu ihe oriri ma unu kpụnye m anụmanụ unu.” 17 N’ihi ya, ha malitere ịkpụtara Josef anụmanụ ha, ya bụ, ịnyịnya ha, ìgwè ewu na atụrụ ha, ìgwè ehi ha, na jakị ha. Josef nọkwa na-enye ha ihe oriri maka anụmanụ ndị ahụ ha nọ na-akpụtara ya. N’afọ ahụ, ha nọ na-akpụtara ya anụmanụ ha, ya ana-enye ha ihe oriri. 18 Mgbe afọ ahụ gwụrụ, ha malitere ịbịakwute ya n’afọ na-eso ya, na-asị ya: “Anyị agaghị ezoro onyenwe anyị ọnụ. Anyị enyechaala onyenwe anyị ego niile anyị nwere, kpụnyekwa ya anụmanụ niile anyị nwere. E nweghịzi ihe anyị nwere anyị ga-enye onyenwe anyị ma e wepụ onwe anyị na ala anyị. 19 Ị̀ ga-anọ na-ele anyị n’anya n’anya anyị anwụọ, ala anyị alaakwa n’iyi? Zụrụ anyị, zụrụkwa ala anyị ka i wee na-enye anyị ihe oriri. Anyị ga-abụzi ndị ohu Fero, ala anyị abụrụkwa nke ya. Nye anyị mkpụrụ ka anyị kụọ, ka anyị wee dị ndụ ma ghara ịnwụ, ka ala anyị gharakwa ịtọgbọ nkịtị.” 20 Josef wee zụtara Fero ala ndị Ijipt niile n’ihi na onye Ijipt ọ bụla rere ala ya maka na ụnwụ ahụ kpụ ọkụ n’ọnụ. Ala ha wee bụrụzie nke Fero. 21 Josef kpọpụtara ndị bi n’ime ime obodo niile dị n’Ijipt kpọga ha n’obodo ndị mepere emepe n’Ijipt.+ 22 Ọ bụ naanị ala ndị nchụàjà ka ọ na-azụrụghị+ maka na ọ bụ Fero na-enye ndị nchụàjà nri. Ọ bụ ihe ọ bụla Fero nyere ha ka ha na-eri. Ọ bụ ya mere na ha ereghị ala ha. 23 Josef gwaziri ndị Ijipt, sị: “Lee, m zụrụla unu na ala unu taa. Ọ bụ Fero nwezi unu na ala unu. Lekwanụ mkpụrụ. Werenụ ya kụọ n’ala. 24 Mgbe ọ ga-amị mkpụrụ, unu ga-enye Fero otu ụzọ n’ụzọ ise,+ ma ụzọ anọ ga-abụ nke unu. Ha ga-abụ mkpụrụ unu ga-akụ n’ubi nakwa nke unu na ndị bi n’ụlọ unu na ụmụntakịrị unu ga na-eri.” 25 Ha wee sị ya: “Ị zọọla anyị ndụ.+ Ọ bụrụ na ihe anyị masịrị onyenwe anyị, ka anyị gbawara Fero ohu.”+ 26 Josef wee tie iwu nke onye ọ bụla n’Ijipt niile na-edebe ruo taa, na onye ọ bụla ga na-enye Fero otu ụzọ n’ụzọ ise nke mkpụrụ ọ bụla ọ kụrụ. Ọ bụ naanị ala ndị nchụàjà bụ ala na-abụghị nke Fero.+ 27 Ndị ezinụlọ Izrel wee biri n’Ijipt, n’ala Goshen.+ Ha kpatara akụ̀ n’ebe ahụ, mụọ ọmụmụ ma baa nnọọ ụba.+ 28 Jekọb biri afọ iri na asaa n’Ijipt. Afọ niile Jekọb dịrị ndụ wee bụrụ otu narị afọ na iri anọ na asaa (147).+ 29 Mgbe Izrel ghọtara na oge ọ ga-anwụ eruwela,+ ọ kpọrọ Josef nwa ya, sị ya: “Ọ bụrụ na ihe m masịrị gị, biko, tinye aka gị n’okpuru apata ụkwụ m* ma gosi m na ị hụrụ m n’anya* nakwa na ị bụ onye m ga-atụkwasịli obi. Biko, elila m n’Ijipt.+ 30 M nwụọ,* buru ozu m pụọ n’Ijipt gaa lie m n’ebe e liri nna nna m hà.”+ Josef sịrị ya: “M ga-eme nnọọ otú i kwuru.” 31 Izrel sịziri ya: “Ṅụọrọ m iyi.” O wee ṅụọrọ ya iyi.+ Izrel wee chee ihu n’isi àkwà* ya kpọọrọ Chineke isiala.+
^ Ma ọ bụ “abụ m onye mbịarambịa.”
^ Ma ọ bụ “n’oge ha bụ ndị mbịarambịa.”
^ O nwere ike ịbụ na Ramesis bụ ógbè dị na Goshen ma ọ bụkwanụ ya abụrụ aha ọzọ a na-akpọ Goshen.
^ Ihe a nwere ike ịbụ otú ndị oge ochie si aṅụrụ mmadụ iyi.
^ Na Hibru, “M soro nna m hà dinara.”
^ Ma ọ bụ “n’isi ihe ndina.”